Maxkamadda Dambiyada Caalamiga oo ka hadashay dagaalka maalinkii shanaad ka socda Ukraine. – XAMAR POST
Maxkamadda Dambiyada Caalamiga oo ka hadashay dagaalka maalinkii shanaad ka socda Ukraine.
By Mohamed Abdi On Mar 1, 2022
Waxaa maalintii Shanaad galay dagaalka aan kala joogsiga la hayn ee ka socda Ukraine una dhaxeeyo Ciidamada dalkaasi iyo kuwa Ruushka oo duulaan dagaal kusoo galay dalka Ukraine.
War kasoo baxay Waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 75% ciidamada Ruushka la isugu keenay xudduudaha Ukraine oo ay hadda ku sugan yihiin gudaha dalka.
Ciidamada ugu badan ayaa hadda ku sugan meel 25-km u jirta caasimadda dalka Ukraine ee Kyiv, inkastoo Askartu weli aysan qabsan labada magaalo ee muhiim ka ah ee Kharkiv oo ku taal waqooyi-bari iyo Mariupol oo ku taal Koonfurta.
Sidoo kale, saraakiisha reer galbeedka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka aysan sameeneyn hormarkii ay qorsheynayeen sababo la xiriira dhanka saadka iyo iska caabin adag oo ay kala kulmeen ciidamada Ukraine.
Dhinaca kale, Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine ayaa sheegtay in gantaallada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal la deggan yahay oo ku yaalla gobolka Kyiv, kuwaas oo ka kooban Sadex dhismo, inkastoo ay xustay in shan dabaq uu ka dhacay weerar gantaalo ah saddex saacadood ka hor, sida lagu sheegay barta Facebook ee wasaaradda.
Sidoo kale, Jarmalka ayaa u soo diraya diyaaradaha dagaalka ee nooca loo yaqaano Tornado iyo kuwa ilaalada badaha, kuwaas oo hawlo sahamin ah ka wada aagga badda Baltic-ga.
Afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga oo ku sugan magaalada Berlin ayaa sheegtay in aysan bixin karin wax tafaasiil ah sababo la xiriira dhanka ammaanka , sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Dhanka kale, maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ayaa furi doonta baaritaan ku saabsan dambiyada dagaal ee uu Ruushka ka geystay Ukraine.
“Waxaa jirta sabab macquul ah oo lagu aamini karo in labada dambiyo dagaal iyo kuwa ka dhanka ah bini’aadantinimadaba ay ka dhaceen Ukraine,” waxaa sidaasi yiri Karim AA Khan, oo ah dacwad oogaha ICC .
Cumar Filish oo sheegay in laga hortagay weeraro ka dhaca caasimada.
Ciidamada Ruushka oo kusii dhawaanaya Magaalada Kyiv + Khasaaro.